မေမေ့ဆီ ဖုန်းခေါ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » မေမေ့ဆီ ဖုန်းခေါ်ပါ
Posted by kai on May 13, 2010 in Health & Fitness, How To.., Know-How, DIY, Science & Religion |3comments
ဆောင်းပါးလေးတပုဒ်ဖတ်မိလို့ မျှတာပါ။ အမေများနေ့လည်း ကျော်သွားပြီဆိုပေမဲ့…အမေဆိုတာက အဝေးရောက်သားသမီးများအတွက် ဘယ်အချိန်မဆို ဖုန်းခေါ်ဖို့ ဆက်သွယ်ဖို့ပါမစ်ယူစရာမှမလိုတာနော..။ဖြစ်ချင်းဖြစ်ရင်..သားသမီးတွေကသာ အမေရေ၊အခုမအားသေးဖူး၊ အလုပ်များနေတယ်၊ ချိန်းထားလို့ Busy, Busy နောက်မှပြန်ဆက် စသဖြင့် ပြောတတ်ကြတာမဟုတ်ပါလား။
ဒီခေတ်ကာလကြီးမှာ လူတွေလူတွေဟာ လုမှုရေးကိစ္စတွေရှုပ်ထွေး၊ နိုင်ငံရေးတွေ ပူပင်ရ၊ ချစ်သူတွေနဲ့ အဆင်မပြေ၊ စိတ်ကောက်သူတွေနဲ့ ပြိုင်ကောက်၊ အလုပ်တွေမှာ လိပ်ခဲတည်းလည်းတွေဖြစ်နဲ့ “ခေတ်ကြီးကိုက ဆိုးပါတယ်။”
ဆိုးတာကြောင့် စိတ်တွေလည်း ဂယောက်ဂယက်နဲ့ စထရက်စ်ခေါ်တဲ့…လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟတွေလွန်နေတတ်တာလည်း ဓမ္မတာလို့တောင် ပြောရမှာပါ။ကဲ.. ဓမ္မတာ လာပြီဆိုပါတော့..(တလွဲမတွေးနဲ့ နော)..ဘာလုပ်ကြမှာလည်း၊ ဘာတွေလုပ်နေသလည်း ..လုပ်သင့်သလည်း မေးချင်ကြမှာပါ။
စထရက်စ်က လူကြီးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကလေးလေး ပိစိပေါက်စတောင်ရှိတယ် ဆိုပါတယ်။ တိရိဆန်တွေမှာလည်း ရှိတာပါပဲ။ ရေထဲက ဂဏ္ဍန်းတောင် စထရက်စ်ရှိရင် အသားနည်းတယ် ဆိုပါတယ်။ သတ္တ၀ါမှန်ရင် ရှိတာတွေပေါ့။ ဒါတွေပျောက်အောင် တချို့ ဆို ဆေးတွေစားကြတယ်။ တချို့ တရားထိုင်တယ်၊ တချို့ ရေထဲဆင်းတယ်။ တိုက်ပေါ်ကခုန်ချတယ်၊ တချို့ ကြိုးနဲ့တွဲလောင်းဆွဲပါတယ်။(သေကြောင်းကြံတာကို ဆိုလိုတာပါ)
အလွယ်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းက မေမေ့ကို ဖုနုးခေါ်တာပါတဲ့..
ဟုတ်ပါတယ်။ မေမေ့ဆီကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ပါ။ နီးနီးနားနားဆိုရင်တော့ မေမေဆီပြေး..။မေမေ့ရင်ခွင်ထဲ ခဏနေလိုက်ပေါ့တဲ့..။
အနောက်တိုင်းသားတွေကတော့ Hug လုပ်ပါတယ်။ ရင်ချင်းအပ်..ဖက်တယ်ပေါ့နော။
မေမေ့သားသား၊မီးမီးပြန်ဖြစ်သွားတာနဲ့အတူ … ခေါင်းထဲရင်ထဲက စထရက်စ်တွေ လွင့်ထွက်သွားမှာအသေအချာပါပဲ။
စရိတ်စက မကုန်ပါဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲ ပြောစရာမလိုပါဘူး၊ မေမေ့ယောင်္ကျားကြီးကို ငဲ့စရာလည်း မလိုပါဘူး၊(အဖေကိုးနော)
အဲဒီနောက်တော့..လောကဓံတရားတွေကို ..“မေမေ့ရဲ့သား၊သမီးတွေ နိုင်ပါပြီ” ..။
( ရေထဲက ဂဏ္ဍန်း အသားနည်းတာ စလရက်စ်ကြောင့်ဆိုပြီး သူ့မေမေဆီဖုန်းမခေါ်ခိုင်းလိုက်နဲ့ဦးနော၊ လက်မကြီးနဲ့ ညှပ်ခံနေရမယ်..။သတိပေးတာပါ)
May 12, 2010 10:39 a.m. EDT
(Health.com) — It’sasituation every mother has been through: Your child is stressed out or upset, but she’s at school or summer camp–too far away for you to give herahug.
The findings bring to mind the 1980s ad campaign for AT&T that urged people to “reach out and touch someone,” says one of the study’s authors, Seth D. Pollak, Ph.D.,apsychology professor at the University of Wisconsin-Madison.
“The idea was that picking up the phone and calling someone would be like giving themahug,” Pollak says. Now, it looks like that may actually be true–at least if your mother is on the other end of the line. (Note: This may depend on the mother.)
The cortisol levels of the girls who were soothed by their mothers–either in person or on the phone–started dropping immediately after the stress test, and returned to normal after aboutahalf-hour. By contrast, cortisol levels in the other group continued to rise after the test and remained higher than normal throughout the experiment. (Normal, in this case, refers to the levels before the stress test began.)
According to Strathearn, who was not involved in the study, this is the first study to demonstrate thatamother’s voice, rather than touch, can measurably raise levels of oxytocin. He himself recently conductedastudy that showed that babies’ oxytocin levels went up when they could hear their mothers’ voice and see them inamirror, but the increase wasn’t statistically significant.
“Mothers know without being instructed how to sootheachild,” Campbell says. “They know because they come fromalong line of women whose genes remained in the gene pool because they kept their kids alive. The challenge is for scientists to illuminate how mothering works–and that’s where oxytocin comes in.”
“From early infancy, this relationship may help to strengthen and promote the development of the oxytocin system, which may have effects into later childhood, adolescence, and even adulthood on how we respond to stress,” he says.
ငယ်ငယ်လေးထဲက အမေမရှိခဲ.တဲ.သူတစ်ယောက်အဘို.ဘယ်သူကို အမေလို.ခေါ်ရမှာလဲ။
မြန်မာပြည်က လူတော. ကိုယ်.ကို ကိုယ်သေကြောင်းကြံတာနည်းပါတယ်။
ဘာလို.လဲဆိုတော. ရင်ထဲမှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ.တရား အနည်းနဲ.အများကိန်းအောင်းပြီးသားမို.လိုပါ။
စိတ်ဓါတ်မခိုင်မာသော တရားမရှိသောသူနဲ. အရူးများသာ ကိုယ်ကိုကိုယ်သတ်သေမယ်လို.ထင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ မိဘကိုခင်တွယ်ရကောင်းမှန်းမသိတဲ အရွယ်ရောက်တာနဲ.အိမ်ပေါ်ကဆင်းလို.မိဘပြောတာကို မနာခံတတ်တဲ. အနောက်ဘက်ကလူတွေရဲ.
ခပ်ဆန်းဆန်းအတွေးလေးတွေကို အစထဲက မိဘကို ရိုသေပြီးသားချစ်ပြီသားအရှေ.ကလူတွေက အထူးအဆန်းလုပ်ပြောတာကတော. ရီစရာကောင်းနေပါတယ်။
ပာုတ်တယ်။ အရှေ့ ကလူတွေက မိဘဆိုတာကို ရိုသေရမယ်ဆိုတာသိပြီးသား ထုံးစံရှိပြီးသား
အမေဆိုတာလည်း ဒုက္ခေ၇ာက်မှ ပြေးပြောတာထက် ဘာလေးဖြစ်ဖြစ် ရင်ဖွင့်ပြောပြတတ်ကြတာတော့ အထူးအဆန်းကိုမပာုတ်တာ။